गुल्मेली जनताको असल भरिया हुँ: चन्द्र भण्डारी | Lumbini Aawaz
गुल्मेली जनताको असल भरिया हुँ: चन्द्र भण्डारी
गुल्मी, १७ कार्तिक, नेपालनीति
प्रतिनिधिसभा एंव प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न भएसंगै देश पुरै निर्वाचनमय भएको छ। सबै दलका उम्मेदवारहरु आ-आफ्नो दलका नेता कार्यकर्तासंगै घरदैलो कार्यक्रम सुरु भएसंगै गुल्मीमा पनि निर्वाचनको रौनक बढेको छ। केन्द्रीय नेताहरुको प्रतिस्पर्धा देखिएको गुल्मीमा मतदातालाई रिझाउन उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बिगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दै मत माग्दै छन।
यसै क्रममा गुल्मी क्षेत्र न. १ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका चन्द्र भण्डारीले आफु गुल्मेली जनताको असल भरिया भएको बताएका छन। २०७० सालमा गुल्मेली जनताले मलाई निर्वाचित गरेर पठईसकेपछि चार बर्षको अबधीमा मैले गुल्मेली जनताको शिर झुक्ने कुनै काम गरेको छैन। गुल्मेली जनताको समस्यासंग हातेमालो गर्दै अगाडी बढिरहेको छु, नेता भण्डारीले बताए।
२०७० सालमा गुल्मेली जनताले तपाईलाई निर्वाचित गराएर पठाए, अब फेरी तपाईलाई नै मत किन? भन्ने प्रश्नमा नेता भण्डारीले मैले गुल्मेली जनतासंग सबैभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछु भनेको थिए त्यो पूरा भैसकेको छ। त्यसका साथै गुल्मीलाई विकासको नमुना जिल्ला बनाउदै लानेछु भनेको थिए, सोही अनुसार कामहरु गरेको छु। बुटवल तम्घास फाष्ट ट्रयाकको काम, खानेपानि, पक्की पुल, बिधालय भवन, सिमान्तकृत समुदायलाई आवास जस्ता थुप्रै कामहरु भएका छन। त्यस्तै यो अबधीमा मैले सांसद बापत पाउने तलब पनि गरिब एंव दलित बिधार्थीको छात्रवृत्तिको निम्ति प्रयोग गरे। त्यसैले गुल्मेली जनताले मलाई विजयी गराउने कुरामा पुर्ण विश्वस्त छु। म फेरी जनताको भरिया बन्न चाहान्छु। नेपालनीतिलाई उद्दृत गर्दै भण्डारीले बताए।
गुल्मी १ मा भण्डारीसंगै प्रतिस्पर्धामा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली मैदानमा छन। भण्डारी र ज्ञवाली दुवै राम्रा नेता भएकाले मतदातालाई समेत मत जाहेर गर्न केही मुस्किल छ। यस्ता नेताहरु एउटै क्षेत्रबाट निर्वाचनमा होमिदा मतदातालाई मत हाल्न कठिन हुने गरेको गुल्मीका केही मतदाताको विश्लेषण रहेको छ। यद्दपी सुरुदेखी नै हेभिव्येटले चर्चा बटुलेको गुल्मी १ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक छ। दुवै उम्मेदवारहरुले आफुलाई अब्बल सावित गर्न घरदैलो अभियान चलाईरहेका छन्।
जनताको समृद्धिका लागि पार्टीले सडक संघर्ष गर्ने– अध्यक्ष राणा कांग्रेस इतिहासकै अत्यन्तै चुनौतीपुर्ण घडीमा उभिएको छ: चन्द्र भण्डारी पीडितले न्याय पाउन – राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी अत्यधिक मतले विजयी राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नेछु – राष्ट्रपति भण्डारी शासक हैन सेवक’ भएर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ –गृहमन्त्री थापा